सीमामा पुगेर चीनलाई नियाल्दा जे देखियो … - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeदेशसीमामा पुगेर चीनलाई नियाल्दा जे देखियो …
सीमामा पुगेर चीनलाई नियाल्दा जे देखियो …
१० वर्ष पहिला पारी (चीन) का मान्छेलाई एकदम दु:ख थियो । गाडी आएपछि सुखी भए । हिउँदमा हाम्रो गाउँ (हुङगोङ) तिर एक छाक खानाको लागि दाउरा टिप्ने, भारी बोक्ने काम गर्थे । हामीले ज्याला दिएर काममा पनि लगाउँथ्यौं । तर अहिले त गाडी आएर यहाँ (नेपाल) का मान्छे पारी (चीन) काम गर्न जान्छन् ।
१८ अक्टोबर २०२१ को बिहान ७:१५ मा हामी संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकाको छुम्सेर गाउँबाट किमाथाङ्कातिर लाग्यौं । छुम्सेर गाउँलाई छोडेपछि हामीले कतै जंगल, कतै भिर, कतै खोचको बाटाहरू छिचोल्यौं ।
झरना हेर्‍यौं र खोलानाला तर्‍यौं । अरुण नदीलाई मुनितिर पारेर दुई घन्टा तेर्सो र दुई घन्टाको उकालो ओरालो अनि फेरि एक घन्टाको उकालो हिँडाइ पश्चात दुङ्गोक्पा भन्ने ठाउँमा पुग्यौं ।
दुङ्गोक्पामा दुई वटा गोठ थिए र किमाथाङ्का जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस पनि त्यही थियो । किमाथाङ्कातिरबाट आएको सडक पनि त्यहीँ भेटियो । डेढ घन्टा यही सडकलाई पछ्याउँदै हामी बरुण संरक्षण क्षेत्रको चेकपोष्टमा पुग्यौं । चेक पोष्टबाट स्पस्टै देखियो चीनको देन्डिङ गाउँ । मलाई मनमनै लाग्यो- ‘शायद त्यही गाउँ नै किमाथाङ्का होला ।’
गाउँ मुन्तिर सेतो रंगको एउटा विशाल सेतो आकारको भवन थियो । त्यो भन्सारको भवन होला र त्यही वरिपरिका घरहरू नेपालीहरूको होला भन्ने लागेको थियो । मैले उद्धव सरलाई सोधेँ, ‘त्यो पारिको गाउँ किमाथाङ्का हो ?’
उनले मुन्टो हल्लाउँदै भने- ‘कहाँ हुनु ? हाम्रो किमाथाङ्कामा २०-२५ वटा घरहरू झुरुप्प एक ठाउँमा छ, बाँकी घरहरू छरिएको छ ।’
किमाथङ्काबाट देखिने चीनको देन्डिङ गाउँ
बरुण संरक्षण क्षेत्रको चेक पोष्टबाट ढुङ्गाको सिँढी हुँदै बाटो ओरालो लाग्छ । खेतभरि लहलहै पाकेको कोदो बाली, ढुङ्गा छापिएका फराकिला बाटो, बाटो माथि र मुनि लस्करै रहेका टिनले छाएका घर हेर्दै हामी ओरालो झर्‍यौं ।
केहीबेर पछि एउटा विसौनीमा दुई जना मानिसहरू सुस्ताइरहेका भेट्यौं । हामीले सोध्यौं- ‘फिन्जोक सरको घर कुन हो ?’
हामीले छ्युमसेरमा बास दिने ल्हाक्पा दाइसँग किमाथाङ्कामा कसकोमा बस्ने भन्ने जिज्ञासा राखेका थियौं । ल्हाक्पा दाइले नै सुझाएका थिए- फिन्जोक सरकोमा बस्नुस् ।
स्थायी घर हुङगुङ भएका फिन्जोक सर विगत १०-१२ वर्षदेखि किमाथाङ्कामा शिक्षण पेशामा आवद्ध रहेछन् । उनले किमाथाङ्कामा आफ्नै घर बनाएर होटल पनि चलाएका रहेछन् । होटल चाहिँ उनकी श्रीमतीले सम्हाल्ने रहिछन् । प्रायः बाहिरबाट किमाथाङ्का जाने पाहुनाहरू उनकै होटलमा बस्दा रहेछन् । ल्हाक्पा दाइको सुझावलाई मनन गर्दै हामी फिन्जोक सरको होटेल सोध्दै गयौं ।
दिउँसो ३:१५ बजे फिन्जोक सरको होटेलमा पुग्यौं । उनलाई हामीले रिताक गाउँमा भेटेका थियौं र होटेलमा उनको श्रीमती र सानी छोरी थिए । हामीले बास पाइन्छ कि भनेर सोध्यौं । सहज जवाफ आयो मुसुक्क मुस्कुराउँदै, ‘बास त पाइन्छ नि हो ।’
हामी झोला बिसाउँदै भित्र छिर्‍यौं र चिया अर्डर गर्‍यौं । सेलाएको शरीर चियाले तताउन थाल्यो । उनले हामीलाई आराम गर्ने कोठा देखाइन् । हामी शरीर सरसफाइ गर्नतिर लाग्यौं ।
भोलिपल्ट एकदिन विश्राम गर्ने र पर्सि किमाथाङ्काबाट हुङगुङ लाग्ने योजना थियो । तर बेलुकादेखि नै पानी पर्न शुरु गर्‍यो, रातभर पानी परिरह्यो । हुँदा-हुँदा तीन दिन लगातार पानी पर्‍यो । प्रकृतिसँग कसको के लाग्छ र ? हामी तीन दिन किमाथाङ्कामै रोकिनु पर्‍यो ।
नेपालको बहुचर्चित आयोजनामध्येको कोशी करिडोर अन्तर्गत पर्ने विराटनगरको रानी भन्सारदेखि उत्तरमा किमाथाङ्कासम्मको यो राष्ट्रिय राजमार्ग हो । किमाथाङ्का गाउँ भोट खोला गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं. १ मा पर्दोरहेछ । किमाथाङ्कामा जम्माजम्मी ८८ घरधुरी रहेका छन् ।
हाम्रो तीन दिने बसाइका क्रममा त्यहाँको बारेमा धेरै जानकारी लिन पाइयो । सीमाको सम्बन्धमा पनि हामी गफियौं । फिन्जोक सर भने, ‘चीनले सीमा मिचेको इतिहासमा कमै छ । किमाथाङ्कामा पनि सीमा मिचेको छैन । अलि अलि बालुवा निकाल्दा पनि यता नेपालतिरको प्रहरीसँग छलफल गरेर मात्र निकाल्छन् । आफ्नो पट्टी अरुणको बालुवा निकालेर लगेको छ तर सिमाना सारेर मिच्ने काम गरेको छैन ।’
उहाँको कुरालाई मनन गर्दा वास्तवमा जसरी भारतसँग नेपालको सीमा विवाद दिनानुदिन हुन्छ त्यसरी चीनसँग खासै यस्ता विवादहरू बिरलै सुनिन्छ ।
तोङ्बाको एक चुस्की लिँदै फिन्जोक सरले फेरि थपे, ‘चिनियाको काम गर्ने तरिका नै बेग्लै छ । उनीहरू रात र दिन गरी दुई-तीन सिफ्टमा काम गर्छन् । सरकारी भवन र बाटो निर्माण गर्दा इस्टिमेट अनुसार मापदण्ड पुर्‍याएर काम गर्छन् । यदि मापदण्ड नपुर्‍याएमा अनुगमन गर्दा कमसल देखिएमा त्यसलाई भत्काएर पुन निर्माण गर्न दिन्छन् । पारी (चीन) एउटा स्कूल निर्माण गरेर तीन तला भएको थियो, अनुगमनमा आएकाहरूले अनुगमन गर्दा इस्टिमेट अनुसारको मापदण्ड पुगेको रहेनछ, फेरि त्यसलाई भत्काएर बनाउन लगाए । हाम्रो देशमा भएको भए यताउती मिलाएर पास गरी हाल्थ्यो होला ।’
किमाथाङ्का पारी चिनिया गाउँ
चीनको तीव्र विकास त्यसै भएको होइन रहेछ । त्यहाँको शासन पद्धति र चुस्त दुरुस्त नियमहरूको पालना गराउने प्रवृत्तिले आज चीनको विकास र आर्थिक गतिमा कायापलट भएको रहेछ । शायद त्यस्तै भएर कोभिड-१९ महामारी शुरु हुँदा वुहानमा दश दिन मै एक हजार शय्याको अस्पताल निर्माण गरेको थियो । हाम्रो देशमा भने हरेक कुरा सेटिङमा चल्छ । त्यसैले होला देशमा विकासले गति लिन नसकेको ।
यही कुरालाई थप्दै फिन्जोक सरले सुनाए, ‘आज भन्दा १० वर्ष पहिला पारिका मान्छेहरूलाई एकदम दु:ख थियो । गाडी आएर सुखी भए । पहिला गाडी नआउँदा उनीहरूलाई हिउँ पराक बेला हिडडुल गर्न गाह्रो थियो । यता नेपालमा पनि हुङगुङसम्म मात्र छिर्न दिन्थ्यो । हिउँदमा हाम्रो गाउँ (हुङगोङ) तिर एक छाक खानाको लागि दाउरा टिप्ने, भारी बोक्ने काम गर्थे । हामीले ज्याला दिएर काममा पनि लगाउँथ्यौं । ज्याला पनि जे दिए पनि हुन्थ्यो । तर अहिले त गाडीको सुविधा भएपछि यहाँ (नेपाल) का मान्छे पारि (चीन) काम गर्न जान्छन् । पहिला अनाजको लागि चीनका वासिन्दा यता नेपालमा भर पर्नुपर्ने थियो । अहिले ठ्याक्कै उल्टो भयो । पारि (चीन) झिलिमिली यहाँ केही छैन । सडक बनेपछि उनीहरूको जीवनस्तर कहाँबाट कहाँ पुग्यो । हाम्रो त अहिले पानी र हावाबाहेक सबै पारि (चीन) बाट आउँछ ।’
नेपालमा २००७ सालको प्रजातन्त्रको उदयदेखि अहिलेसम्म निकै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, निर्दलीय पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा निकै राजनीतिक व्यवस्थाहरू फेरिए पनि जनताको जीवनस्तर र भुईं मान्छेको समस्या फेरिएन ।
वैदेशिक ऋणको भार दिनानुदिन थपिँदै छ । सीमामा बस्ने जनताको स्थिति र समस्याहरू पनि त्यस्तै छन् ।
यसरी गफिँदा गफिँदै रातको ८ बज्न लागेको थियो । साहुनीले खाना खाऊँ अब भनिन् र हामी खाना खानतिर लाग्यौं । खाना खाइसकेपछि भने भोलि के गर्ने भन्ने हामीबीच छलफल भयो । छलफल पश्चात, यदि पानी परेमा किमाथाङ्का नै बस्न नपरे जाने भन्ने योजनाका साथ हामी सुत्नतिर लाग्यौं ।
Previous articleमोबाइल एपबाटै पार्टी सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्दै एमाले
Next articleभारतीय फूलले नेपाली बजार कब्जा